Ogaden News Agency (ONA) – Booliiska & Militariga Magaalada Bahardar oo Qoorta Iskula Jira.
Booliiska & Militariga Magaalada Bahardar oo Qoorta Iskula Jira.
Posted by Dulmane	/ November 5, 2017
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Bahardar ee xarunta Gobolka Axmaarada ayaa sheegaya in ay xiisad culus magaalada kataagantahay kadib markii ciidanka wayaanuhu ay xabsiyada dhigeen boqolaal dhalinta magaalada ah.
Sida xogta aan kuhelayno xiisada ayaa bilaabatay kadib markay ciidamada mulatariga wayaanuhu guryahooda kuweerareen boqolaal dhalinta magaalada ah kuwaas oo si sharci daro ah ay usoo xidh xidheen kadib markay jidh dil ba’an ugaysteen.
Ciidanka Boliiska magaalada Bahardar ayaa lagusoo waramayaa in ay siwayn uga cadhoodeen talaabada ay ciidanka wayaanuhu qaadeen waxayna ciidanka Booliisku sheegeen in aan indhaha laga laaban karin talaabada marin habowga ah ee ay qaadeen ciidanka mulatariga wayaanuhu.
Ciidanka Booliiska ee magaalada Bahardar ayaa ku andacoonaya in ay iyaga shaqadooda tahay in ay soo qaqabtaan dadka dambiyada gala ama qaswadayaasha, waxayna Booliisku sheegeen in aan waxba laga ogaysiinin markii howl galka dhalinta lagu soo qaqabtay laqaadayay.
Dhinaca kale taliska wayaanaha ayaa ku doodaya in ciidanka Booliiska oo kaliya aan lagu halayn karin amaanka wadanka wuxuuna talisku sheegay in qalalaasaha wadanka kajira ciidamada oo dhan looga baahan yahay wax kaqabadka amaanka.
Maxkamaga Gobolka Bahardar oo arintan soofara galisay ayaa sheegtay in ciidanka mulatarigu ay si sharci daro ah uqabteen shaqadii Booliiska iyagoo sidoo kale dhalin yaro aysan maxkamad xukumin kuhaya xeryaha ciidanka ee magaalada Bahardar.
Iskusoo wada duub oo xiisada cusub ee u dhaxaysa ciidanka Booliiska ee magaalada Bahardar iyo ciidanka mulatariga ayaa lafilayaa in ay cirka isku sii shareeri doonto taas oo luminaysa wadashaqayntii iyo amaankii Gobolka.